Ngemuva kokugeza noma ukugezela, hlambulula umzimba wome ngethawula. Kunomzwelo omuhle wokufudumala nokuqina kwamandla. Angiyena umsizi wezinhlobonhlobo zezinwele ezihlukahlukene, ngihlale ngiphuthuma empilweni futhi anginaso isikhathi esanele sokwenza massage kanye nokunakekelwa komzimba ukuthi ochwepheshe in beauty salons angasinikeza. Ukunakekela umzimba phakathi kwecala - kungimi. Kodwa lokhu akusho ukuthi angithandi umzimba wami futhi angikhathaleli. Isikhumba sami sihlale sihlelekile futhi sihle. Akudingeki uzithande ukushiya umzimba wakho nokubukeka kwakho. Futhi udinga ukuzithanda ngokwakho kakhulu, njengendlela yokubonisa imibukiso!
Ngikholelwa ngokungapheli emandleni amakhulu kakhulu othintana kahle. Uma ngifunde ngandlela-thile ukuthi impilo enhle sidinga izingodo eziyisishiyagalolunye ngosuku. Ngempela, akukho okunye okududuzayo nokuqabulayo kunokwamukela isithandwa somuntu othandekayo. I-massage nayo inezindawo zokuphulukisa. Ukucindezeleka nokucindezeleka kubonakala sengathi kuhlakazeka futhi kuyanyamalala. Ngaphezu kwalokho, ukusikhipha umzimba kusinikeza umqondo wobuseduze bomuntu, esiwufisa kakhulu.
Ngokuzikhandla ngesimo sesikhumba, singabuyela iwashi. Omile, isikhumba esihlelekile ngeke sibonakale sihle. Ngesikhumba esinjalo angifuni ukuthinta futhi ngisho kubonakala kungathandeki. Ngizama ngokuzithandela ama-creams, ama-lotions, ama-oils amaningi. I-neutrogena i-Neutrogena ikhiqiza amafutha omsizi omuhle kakhulu. Kukhanya kakhulu futhi kunesici esihle. Faka isicelo ngemuva kokugeza. Ithuluzi elihle kakhulu - "Ukuqalisa Imithombo" Imithombo Yokuqalisa. Amafutha, okuba ukhilimu wesimangaliso, kufanele afakwe kuphela esikhumbeni. Izitolo zokudla, ngokungavamile, ziphinde zibe umthombo wemikhiqizo yokunakekela isikhumba. Amafutha e-almond, ikakhulukazi, ayilondoloza kahle futhi alula kalula. Ngisebenzisa konke okungakwandisa umsebenzi wokuzivikela wesikhumba nokuvimbela ukukhuphuka komswakama.
Amanzi yisisekelo somzimba wethu, futhi kufanele siphuze amanzi amaningi. Izibuko eziyisithupha noma eziyisikhombisa ngosuku ngosuku okungenani. Ukwehla kwamanzi emzimbeni kungadlulela ngokungalindelekile. Uma uzizwa ukulahlwa okuthile noma ubuhlungu bekhanda buza kuwe, bese ngokuhamba kwesikhathi ingilazi yamanzi ephuzile ingavimbela ukuwohloka kwesimo. Isikhumba, esihlanganiswe kahle ngaphakathi, sibonakala sihle kakhulu ngaphandle. Phuza futhi ube mnandi!
Amandla nentamo ukhululeka kakhulu. Yingakho kudingeka baqashwe ngokucophelela, ikakhulu ebusika. (Ngaphezu kwalokho, ngabona ukuthi abesifazane abasebenzisana namaphepha banezandla ezomile kakhulu - iphepha lithinta umswakama). Ngokufanayo, labo abavame ukuphoqeleka ukuba banciphise emanzini kufanele banakekele izandla zabo. Kubo, indlela kuphela yokuphuma yi-iglavu. Ithuluzi eliphawulekayo libuye "Neutrogena Norvergian Formula" I-Neutrogenas yaseNorway Formula.
Ngokuqondene ubuso nentamo, into yokuqala okufanele uyenze ukukwenza ukuthi ungaphansi kwelanga. Hamba kuphela eceleni kwe-shady yomgwaqo, gqoka izigqoko ezinomphelo ovimbela ubuso kuphela, kodwa namahlombe. Noma sebenzisa ukhilimu ngezihlungi ze-UV ezivikelayo. Mhlawumbe ucabanga ukuthi nginaka kakhulu ngale nkinga, kodwa, kholwa mina, imizamo yakho iyovuzwa.
Uma udinga i-tani, yenze ngokuzenzakalelayo. I-Lancome, isibonelo, inokukhetha okumnandi kwe-shades. Le nkampani iphinda ikhiqize i-spray ye-tanning elula kakhulu engasetshenziswa ngisho nasezindaweni ezinzima ukufinyelela. Ukushiswa kwelanga okufakelwayo kungcono kakhulu kumvelo: ungakhetha ithoni nokuqina, futhi okubaluleke kakhulu, londoloza impilo yakho.
I-pedicure ne-manicure enhle ingaphazamisa ukunakwa ezingxenyeni ezingaphelele ngokuphelele zomzimba. Ngiyahambisana nomthetho othize kulokhu: ukuhamba ngokumangalisayo nokumamatheka okunomsoco kakhulu. Amandla asekhulile masinyane, futhi akunangqondo ukuwaheha. Umbala ongabonakali ubonakala unhle ezandleni zethu.
Izipikili ezide kakhulu zibuye zigugile, nakuba abanye besifazane bebaphatha kahle. Abanye abangane bami bathi izipikili ezinde zibasiza bazizwe besifazane. Mina ngokwami ​​ngithanda uhlobo lwemvelo lwezinzipho, futhi nginqume ngokushesha. Ngifuna izipikili zibe nokubonakala kahle. Ukugcoba umzimba kufanele kufane nokuphila. (Lokhu, Nokho, akusho ukuthi ngaphansi kwemizwelo awukwazi ukupenda izipikili zakho nge-varnish ebomvu ebomvu.)
Ungalokothi wenze umsebenzi wesikole ngaphandle kweglavu yegraber. Ukuhlanza kanye ne-detergents kuyaphanga izandla zakho nezipikili. Ngisho nothuli ngaphandle kweglavu akusula - luma izandla; Sebenzisa amaglavu wekotini (ashibhile ngokwanele futhi athengiswa ezitolo ze-hardware). Ngendlela, nginikeza inqubo enhle kakhulu yezandla: sebenzisa ungqimba obukhulu kakhulu ukhilimu onomsoco futhi ugqoke amagilavu ​​ekotini. Ekuseni izandla zizoshiswa ngokushelela! (Ngincoma inqubo efanayo yemilenze.) Ngihlale nginezigulana emotweni yami, ngoba ilanga elikhulu lifika ezandleni zami. Qinisekisa ukugqoka amagilavu ​​endaweni ebandayo nemvula. Qaphela izandla zakho, futhi ziyokuvuza ngekhulu.
Ngokuvamile asikho ngisho nokusola ukucindezeleka okuqongelela ezandleni zethu. I-Massage izosiza ukususa ngokuphelele. Kuwusizo ukuxoqa ama-brushes, ukuwagoqa kuzo zonke izinkomba, ukukhipha isandla. Yamukela umunwe womunye ngeminwe yesandla esisodwa bese uyidonsela phezulu; bese ugeza izandla nge-ayisikhilimu ephumuzayo (ungabamba ukhilimu omzuzwana eminjini emincane). Izinsalela ze-ukhilimu zigaxa endaweni yezipikili, lapho isikhumba soma kakhulu, ikakhulu ebusika. Kumele uhlise izinwele zakho. Izandla ziwukuqala komuntu wesifazane, futhi kufanele zibushelelezi, zithobe futhi zithobe.
Ziqaphele, unakekele umzimba wakho, ube mnandi, ngoba nowesifazane wesimatasa (njengami) uyakwazi ukuzinikela isikhathi!
Susa ukukhathala ezandleni: ukuvocavoca, ukuphunga, ukugeza
Ungakugeza kanjani i-tan yokufakelwa?
Ngalokho okudingekile ukwenza izingane zokuxuba
Apple jam ebusika
Impilo enhle ngesikhathi sokuqala kokukhulelwa
Oatmeal casserole nge amajikijolo namantongomane
Amakhekhe we-chocolate nge-ginger
Ukuthambekela kobuhle behlobo: amaqiniso amathathu mayelana nokuhlelwa kwemvelo
Izimbali ezenziwe ngamabhodlela eplastiki
Indlela yokufunda ukuthi ungayisebenzisi yonke imali: amaphutha ayisisekelo
Inyama ne-chinanasi ku-sauce elimnandi nelomuncu
His hisque hisquequeque his hisque hisque hisqueque hisque his hisque hisqueque hisque his his hisque his hisque his his his his his followingque hisqueque hisque his his hisqueque his hisque
Abantu badabuka nini besifazane?
Izakhiwo zokuphulukisa ze-cowberry
Uma indoda ingasheshi ukushada - ayisho ukuthi ayithandi